Wararka - Arimaha u baahan fiiro gaar ah marka lagu farsameynayo qalabka isku dhafan mashiinada wax lagu shiido ee CNC (xarumaha makiinadaha)
1. Maxay yihiin walxaha isku dhafan?
Maaddooyinka isku dhafan ayaa loo qaybin karaa
Qalabka isku dhafka birta iyo birta, qalabka biraha iyo biraha aan isku dhafaneyn, qalabka biraha aan biraha iyo birta ahayn.
Marka loo eego astaamaha qaabdhismeedka, waxaa jira agabyada isku dhafan ee soo socda:
Waxyaabaha isku dhafan ee Fibreerka ah, qalabka isku dhafka sandwich, maaddooyinka isku dhafan ee qamadiga, qalabka isku dhafan ee isku dhafan.
Ta labaad, dhibaatooyinka ay tahay in xarunta makiinada ay fiiro gaar ah u yeelato marka laga shaqeynayo qalabka isku dhafan.
1. Waxyaabaha isku dhafan ee kaarboon kaarboon waxay leedahay awood dhexdhexaad ah oo hooseysa waana sahlan tahay in la soo saaro hoos u dhac ku yimaada ficilka jarista xoogga. Sidaa darteed, waa in la yareeyaa awoodda faasaska marka la qodayo ama la jarayo. Qodista waxay u baahan tahay xawaare sare iyo quudin yar. Xawaaraha xarunta mashiinku guud ahaan waa 3000 ~ 6000 / min, heerka quudintuna waa 0.01 ~ 0.04mm / r. Qodista daloolintu waa inay ahaataa saddex geesood iyo laba af leh ama laba gees leh iyo laba gees leh. Way fiicantahay in la isticmaalo mindi fiiqan. Caaraddu way goyn kartaa lakabka kaarboon kaarboon marka hore, labada caaradoodna waxay hagaajinayaan darbiga godka. Daloolinta dheeman-inlaid waxay leedahay fiiqan aad u fiican waxayna xirtaa iska caabin. Qodista maaddooyinka isku dhafan iyo sandwich-ka loo yaqaan 'titanium alloy sandwich' waa mushkilad aad u adag. Guud ahaan, carbideyaal adag oo carbide ah ayaa loo isticmaalaa in lagu qodo iyadoo loo eegayo xuduudaha goynta qalabka alxanka titanium. Dhinaca daawaha ah ee titanium ayaa la qoday marka hore illaa inta laga gaarayo daloolinta, oo saliid lagu darayo inta lagu guda jiro qodista. , Yaree gubashada walxaha isku dhafan.
2. Saamaynta goynta mashiinnada wax shiida ee khaaska ah ee makiinadaha 2, 3 nooc oo ah walxaha adag ee carbide-ka cusub ayaa ka fiican. Dhammaantood waxay leeyihiin astaamo caan ah: adkaansho sare, xagal yar oo helix ah, xitaa 0 °, iyo garbaha laf-dhabarta si gaar ah loogu talagalay ayaa waxtar yeelan kara. Iska yaree awoodda jarista foosha ee xarrunta mashiinka oo hoos u dhig delamination, waxtarka iyo ku-shaqaynta qalabka ayaa aad u wanaagsan.
3. Chips-ka walxaha isku dhafan waa budada, oo waxyeelo u leh caafimaadka dadka. Aaladda faakiyuumka ee tamarta sare leh waa in loo isticmaalaa in lagu nadiifiyo. Qaboojinta biyuhu sidoo kale waxay si wax ku ool ah u yareyn kartaa wasakheynta boodhka.
4. Waxyaabaha ay ka kooban tahay isku-darka kaarboonka fiber carbon-ka guud ahaan waa weyn yihiin cabir ahaan, qaab ahaan iyo qaab dhismeedkoodu aad u adag yahay, isla markaana ku sarreeya adkaansho iyo xoog. Way adagtahay in la farsameeyo qalabka. Inta lagu guda jiro hawsha goynta, xoog jarista ayaa xoogaa weyn, kuleylka goynta si fudud looma gudbin karo. Xaaladaha daran, xasaasiyadda ayaa la gubi doonaa ama la jilcin doonaa, oo qalabka qalabku wuxuu noqon doonaa mid culus. Sidaa darteed, aaladda ayaa fure u ah ka shaqeynta fiber fiber-ka. Habka jariddu waxay u dhowdahay wax shiididda marka loo eego shiididda. Xawaaraha goynta toosan ee xarunta makiinada ayaa sida caadiga ah ka weyn 500m / min, istiraatiijiyad xawaare sare iyo quudin yarna waa la qaatay. Qalabka jarista Edge - guud ahaan waxay isticmaalaan jarjarayaal adag oo jarjaran oo carbide ah, giraangiraha hadhuudhka shiidan ee dhejiska elektaroonigga ah, jarayaalyaasha wax lagu shiido ee dheeman-inlaid, iyo baalashada miraha dheemanka ku salaysan